Ankoatra ny fisavana ny vatana iray manontolo, maro ireo fitaovana tsy azo nentina niditra tao an-toerana toy ny cable miasa amin’ny fitaovana fakan-tsary, ny power bank izay miantoka ny fahafahan’ny finday mandeha, indrindra ho an’ireo mampita ny vaovao mivantana, ny écouteur…. Tsy nisy anefa ny toerana nahafahana nametraka izany ka voatery nivoaka nitady olona indray ny mpanao gazety vao afaka niditra nefa ny ora efa nandeha, ireo manampahefana efa niditra. Tsy nisy ihany koa ny filazana mialoha nahafahana niomana, hany ka nahatsiaro sahirana ny rehetra. Nisy tamin’ireo mpanao gazety no in-telo voasava vao tafiditra tanteraka. Nosavaina hatramin’ny poketra fitoeram-bola mihitsy omaly izay somary nahavariana ihany.